I-Desulphurization Skid Factory | China Desulphurization Skid Abakhiqizi, Suppliers
I-Natural Gas Purification System I-molecular sieve desulphurization
Ngokuthuthuka komphakathi wethu, sikhuthaza amandla ahlanzekile, ngakho isidingo segesi yemvelo njengamandla ahlanzekile siyakhula. Nokho, ngesikhathi sokuxhashazwa kwegesi yemvelo, imithombo eminingi yegesi ivame ukuba ne-hydrogen sulfide, ezodala ukugqwala kwemishini namapayipi, ingcolise imvelo futhi ibeke engozini impilo yabantu. Ngokuthuthukiswa kwesayensi nobuchwepheshe, Ukusetshenziswa okubanzi kobuchwepheshe begesi yemvelo desulfurization kuye kwaxazulula lezi zinkinga, kodwa ngesikhathi esifanayo, izindleko zokuhlanzwa kwegesi yemvelo kanye nokwelashwa kuye kwanda ngokufanele.
Iyunithi yokuhlanza igesi ye-Hydrogen sulfide
Isingeniso Ngokuthuthuka komphakathi wethu, sikhuthaza amandla ahlanzekile, ngakho isidingo segesi yemvelo njengamandla ahlanzekile siyakhula. Nokho, ngesikhathi sokuxhashazwa kwegesi yemvelo, imithombo eminingi yegesi ivame ukuba ne-hydrogen sulfide, ezodala ukugqwala kwemishini namapayipi, ingcolise imvelo futhi ibeke engozini impilo yabantu. Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, Ukusetshenziswa okubanzi kobuchwepheshe begesi yemvelo desulfurization kuzixazulule lezi zinkinga, kodwa ngesikhathi esifanayo ...
I-Molecular sieve desulphurization (desulfurization) skid, ebizwa nangokuthi i-molecular sieve sweeting skid, iyithuluzi eliyinhloko ekuhlanzeni igesi yemvelo noma ukulungisa igesi yemvelo. Isisefo samangqamuzana i-alkali metal aluminosilicate crystal enesakhiwo sohlaka kanye nesakhiwo esifanayo se-microporous.
I-Natural Gas Sweetinging Skid
I-MDEA ye-natural gas desulphurization (desulfurization) skid, ebizwa nangokuthi i-MDEA sweeting skid kanye neyunithi ye-natural gas desulfurization, iyithuluzi eliyinhloko ekuhlanzeni igesi yemvelo noma ukulungisa igesi yemvelo.
I-skid yemishini yokwenza igesi yemvelo
Isisefo samangqamuzana esisetshenziswa segesi yemvelo esimnandi (desulfurization) skid, esibuye sibizwe ngokuthi ukususwa kwe-molecular sieve sulfide kusuka kugesi yemvelo , iyithuluzi eliyinhloko ekukhishweni kwe-H2S kugesi yemvelo kanye nokwelashwa kwegesi yemvelo.
I-MDEA desulphurization skid yokwelashwa kwegesi yemvelo
I-MDEA desulphurization (desulfurization) skid, ebizwa nangokuthi i-MDEA sweeting skid, iyisisetshenziswa esibalulekile ekuhlanzeni igesi yemvelo noma ukulungisa igesi yemvelo.